May 12, 2021 - Channel Lover
ယနေ့ည MRTV သတင်းကြည့်ပီး ၀မ်းနည်းစွာပြောကြားလာခဲ့တဲ့ အမဖြစ်သူ
May 12, 2021 by Channel Lover
ယနေ့ည MRTV သတင်းကြည့်ပီး ၀မ်းနည်းစွာပြောကြားလာခဲ့တဲ့ အမဖြစ်သူ ယနေ့ည MRTV သတင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုပီး တက်လာတာက တလုပ်မြို့ရွာမှာ ခြေထောက်ကို ကျည်ထိမှန်ထားပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဓာတုဗေဒ တတိယနှစ်ကျောင်းသား ကိုကျော်ဇင်ဦး ဆိုသူမှာ သူ့ရဲ့မောင်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့ ပြောကြားလာပါတယ်…။ ငါ့မောင်လေးပါဟယ် အသက်က 20တောင်မပြည့်သေးဖူး ဟ သူ့ခဗျာ အိမ်နဲ့ကို အတိုက်အခံလုပ် နိုင်ငံတော်အတွက် မိဘ ကိုတောင်တချက်မငဲ့ဘဲ အဝတ်တထည် လွယ်အိတ်တလုံးနဲ့ သွားခဲတာ ဒီနေ့နဲ့ဆို 32ရက်မြောက်ပေါ့ ဗိုက် များဆာနေမလား ကျည်ဒဏ်ရာ တွေရော ငါ့မောင်ရေ နာ နေလား လို့ ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ ငါ့နင့်နဲ့ ရန်ဖြစ်ချင်သေးတယ် ငါတို့ဆီ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြန်လာဖို့ နင် တောင့် ခံထား နော်😭🥺 … Read more
ခွဲဂဏနြးကောငြးရာက ရှာလုံးကွှတခြွဲပေါကြ !! ထိုငြးနိုငငြံမှောကပြိုငြးက လနြးပနြးခရိုငနြဲ့ ခရိုငခြငြွးကပလြကွဖြှဈတဲ့ ဖရဲ့ခရိုငမြှာ ဒီအပတထြှကသြှားတဲ့ထီနောကပြိတြ ၃ လုံးဂဏနြးကို တဈရှာလုံးလိုကထြိုးရာက ရှာလုံးကွှတပြေါကကြှရာ ဒိုငကြမလွောနြိုငတြော့တာကှောငြ့ ရုနြးရငြးဆံခတဖြှဈ ပှားခဲ့ကှောငြးသိရပါတယြ။ ရှာလုံးကွှတပြေါကခြဲ့ကှတဲ့ ခွဲလွောကြှေးစုစုပေါငြးဟာ ဘတငြှေ ၇၄ သနြးခနြ့ထိရှိတယလြို့သိရပါတယြ။ အဲဒီမှာမှ အခွို့ဒိုငတြှကတေော့ ထကဝြကလြွောပြေးပမယြေ့ ဒိုငအြတောမြွားမွားဟာ မလွောနြိုငကြှတာကှောငြ့ ရှာသားတှဟော ခွဲဒိုငတြှရေဲ့အိမကြိုဝိုငြးထားကှရာမှ ရဲတှသှေားရောကဖြှရှငြေးပေးခဲ့ရတယလြို့သိရပါတယြ။ ရှာထဲကရှာသားတဈဦးဟာ ပါကွဲရိုးကားအသဈဝယရြာက ကားလိုငစြငနြံပါတကြို လိုကထြိုးကှတာဖှဈတယလြို့သိရပါတယြ။ အဲဒီကစပှီး ခွဲဂဏနြးဟာစတငပြွံ့နှံ့ခဲ့ရာက ရှာလုံးကွှတခြွဲပေါကခြဲ့ကှတာပါ။ ထိုငြးနိုငငြံမှာ ၆ လုံးထီကှီးသာတရားဝငဖြှဈပမယြေ့ အနယနြယအြရပရြပမြှာ ၃ လုံးထီတှဟော နယမြှခေံတှရေဲ့နားလညမြှု့နဲ့ရောငြးခနွကှတောပါ။ ထိုငြးအစိုးရကတော့ ၃ လုံးထီဖမြးမိပါက ထောငဒြဏြ ၃ နှဈနှငြ့ ၅ ထောငထြကမြကွောတြဲ့ ဒဏငြှခမွှေတနြိုငကြှောငြးလညြးဥပဒထေားရှိထားပါတယြ။ Ref: One31news WinHtet Myanmarworkinthailand … Read more
စ ဈ ပှဲ ကွောငျ့ မိခငျမဲ့သှားရရှာတဲ့ (၄)လသား ကလေးငယျ…
မကျြနာကို မွငျတာနဲ့ ဒီကလေးငယျလေးကိုခဈြခငျဖှယျရှိကွမယျထငျပါတယျ – “ ဒီကလေးလေးကို သူ့အမဆေုံးပွီး တပတျကွာတဲ့ထိ ရှာက မထှကျပွေးရဲလို့ ဗုံးခိုကြ ငျး ထဲမှာ ထားပွီးနခေဲ့ရတယျ၊ ကငျြးထဲမှာ ခွ ငျ ကို ကျတော့ ခွငျဆေးခှထှေနျးရတယျ။အဲ့အနံ့တှကွေောငျ့.. ကလေးက ခြော ငျး ဆိုးပွီး ခုထိ ရ ငျ ကြ ပျ နတော” – မွို့သဈမှာ ည(၂)နာရီကြျော စ ဈ ဖွ ဈ တဲ့အခြိနျ အိမျပျေါ လ ကျ န ကျ ကွီး ကပြွီး ပေါ ငျ အ တှ ငျးသား ထိ … Read more
၈၈ အရေးခင်းတုန်းက CDM မလုပ်တဲ့ ငယ်ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ မင်းအုပ်စိုး
၈၈ အရေးခင်းတုန်းက CDM မလုပ်တဲ့ ငယ်ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ မင်းအုပ်စိုး အတိတ်ကိုပြန်တွေး ကျေးဇူးတင်မိပါရဲ့ ကျွန်တော့်အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပါ ။ ဘယ်လောက်ကျော်လဲ တိတိကျကျတော့ ပြောမပြတော့ပါဘူးဗျာ။ ဖြူနေတဲ့ခေါင်းရယ် ဖြူနေတဲ့နူတ်ခမ်းမွေးရယ် ဖြူနေတဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေရယ် မြင်လိုက်ရရင်တော့ဆယ်ရှစ်နှစ်ကို နှစ်တွေအများကြီးမကျော်သေးဘူးဆိုတာ တွက်ဆကြည့်လို့ရမှာပါ ။ ကြွားတယ်လဲမထင်ပါနဲ့ ကြုံတုံးမှာပြောပြမိတာပါပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ရင်လဲ ကျွန်တော်က ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ပါ ။ ရထားတဲ့ဘွဲ့ကလဲ ဟိုဘက်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်တော့နံပတ်၅နေရာလောက်မှာရှိတဲ့ ဘူမိဗေဒမေဂျာနဲ့ ကျောင်းပြိးထားတဲ့ ဘူမိဗေဒ ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ပါ ။ ဘူမိဗေဒကိုတောင် ၁၀တန်းအောင်တုန်းကအမှတ် ၄၁၇ မှတ်ရတာကြောင့် ပထမနှစ်မှာ Roll No .9 နဲ့ တက်ခဲ့ရတာပါ ။ ကျွန်တော် အဓိကပြောချင်တာက ကျွန်တော့်ပညာရေးမဟုတ်သလိုကျွန်တော့် အကြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝက ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကို စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ … Read more
ဒီလောကျအဖမျးခံထားရတာတောငျ ပွညျသူတကေိုမရရအောငျကူညီနတေဲ့ဦးဇျောဇျော ဝငျသာဖတျကွညျ့တော့ဗလြေးစားလြှကျပါဉီးဇျောဇျောယနေ့AYA က Bankဝနျထမျး ညီမလေး အသံခြိုခြိုလေးနဲ့ ဖုနျးဆကျလာတယျ။ ကမြအမညျကိုမေးပွီး ဒျေါအိအိသိနျး ဟုတျပါသလားရှငျ့တဲ့။ဟုတျပါတယျလိုလတျတလော အခွအေနအေရ ဘဏျတှပေိတျထားတဲ့အတှကျ E Money ထုတျရနျ အဆငျပွစေရေနျအတှကျ သတငျးကောငျးလေး ပေးခငျြလို့ပါ။ အခြိနျလေး ခဏလောကျပေးလို့ရမလာရှငျ့။ဟုတျရပါတယျလို့ဖွလေိုကျပါတယျ။Max Energy ဆီဆိုငျတှမှော AYA Pay Event AYA Pay wallet နဲ့ ငှေ သားထုတျယူခွငျး E Money ဖွညျ့ပေးခွငျး ကိစ်စမြားကို 24.3.2021 မှစပွီ ဝနျဆောငျမှူ ရယူနိုငျပွီဖွဈကွောငျး သတငျးကောငျးလေး ပေးခွငျးလို့ပါ။အေးအေး ကြေးဇူး ကြေးဇူးပါ ညီမလေးလို့ဖွလေိုကျပါတယျ။ AYAမှလတျတလော မှာတော့ ဗဟနျး Max Energy သုဝဏ်ဏ Max Energy တောငျဥက်ကလာMax … Read more
“HA HA မြား ပြျောသ လောကျ ပေးနိုငျ ပါသညျ” ဆိုတဲ့ ယုနျလေး ရဲ့ ပိုဈ့တဈခု…
“HA HA မြား ပြျောသ လောကျ ပေးနိုငျ ပါသညျ” ဆိုတဲ့ ယုနျလေး ရဲ့ ပိုဈ့တဈခု တောငျဥက်ကလာမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတှေ နဲ့ ပတျသတျပွီး ပရိသတျတှကေို သသေခြောခြာပွနျရှငျးပွခဲ့တဲ့ ယုနျလေး ပရိသတျကွီး ရေ ယုနျလေးကတော့ တောငျဥက်ကလာမှာ ရှိနခေဲ့တာပါနျော။ တဈခြို့ ပရိသတျတှကေတော့ ယုနျလေးကို တှတေဲ့နရော တိုငျးမှာ ဆဲရေးတိုငျးထှာခွငျးတှေ ရှိနခေဲ့တာပါနျော။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသတျပွီး ယုနျလေးကတော့ အခု လို ရှငျးပွလာပွနျပါပွီနျော။ “ဒီ အခြိနျမှာ ကြှနျတျော သညျ အဝေးတဈနရောမှာ နရေငျနေ ဘုနျးကွီး ဝတျနရေငျ ဝတျ လူရှေ့ မထှကျလာတာ အကောငျးဆုံး ဆိုတာ ကြှနျတျော သိပါတယျ . ဒီနေ့ ပူးပေါငျးတာ ဒိုငျးအဖှဲ့ … Read more
ပိုပို သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာပြောလာတဲ့… ဇင်မို့မို့လွင်
ပိုပို သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာပြောလာတဲ့… ဇင်မို့မို့လွင် ကျွန်မ အမ ပိုပိုနဲ့ပက်သတ်ပြီး စိတ်ကျန်းမာ‌ရေး မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့နေတာ တွေ့ရပါတယ် ခု ညီမတို့ဘက်က စုံစမ်းရ‌သလောက်တော့ အင်းစိန်ကိုလည်း မရောက်သေးလို့ သတင်းကြားရပါတယ် မပိုရဲ့ သတင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီးအမှားတွေ မတင်စေချင်ပါဘူး ခုချိန်ထိ ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိသေးတဲ့ သူ့အပေါ် အဆိုးတွေအများကြီးသက်ရောက်သွားတာ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါ ခု မပိုရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အပြုအမူကို တွေ့ခဲ့တဲ့ အင်းစိန်ထောင်က လွတ်လာတဲ့ အကို /အမ ရေ ဒီသတင်းက comfirmဖြစ်တယ်ဆို ညီမကို cbမှာ လာပြောပေးပါရှင် ခုအမသတင်းကို ဘာမှမကြားရသေးတဲ့အတွက် ဒီလိုသတင်းကြောင့် ပိုပြီး စုံစမ်းမရမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ ဒီနေ့နဲ့ဆို မပိုဖမ်းခံရတာ 28 ရက်ရှိပါပြီ Unicode ပိုပို သတငျးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး … Read more
မနက်ခင်းတိုင်း အသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေး ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ မနက်ခင်းအသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများကိုယ်တွေ နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးဒီလိုအစွမ်းထက်မှန်း အခုမှသိရလို့ ကျေးဇူးပါသွားတိုက်ဆေးကို မနက်တိုင်းသွားသန့်ရှင်း တောက်ပြောင်ဖို့နဲ့ ခံတွင်းနံ့ကင်းစင်ဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရတာမဟုတ်ဖူးနော်…သွားတိုက်ဆေးနဲ့ အခြားဖြေရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းအချို့လည်း ရှိပါသေးတယ် … (၁) အမဲစက်နဲ့ အမဲကွက်ပြသာနာများ … သွားတိုက်ဆေး ၁ ဇွန်း နှင့် သံပုရာရည် ၂ စက် တို့ကို ရောမွှေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ အမဲစက်နှင့် အမဲကွက်များပေါ်သို့ပွတ်လိမ်းပေးပြီး ၁၀ မိနစ် (သို့) ၁၅ မိနစ်ခန့် ထားပါ။ ပြီးလျှင် ရေဆေးချလိုက်ပါ။ (၂) ဝက်ခြံပြသာနာများ … သွားတိုက်ဆေးကို နားကြပ်တံ သို့ ဂွမ်းတံလေးနဲ့ ယူပြီး ဝက်ခြံပေါက်နေသည့် နေရာများကို ပါးပါးလေးပွတ်လိမ်းပေးပါ။ … Read more